Accueil > Gazetin'ny nosy > Fetim-pirenena : Malazolazo ny fankalazana fa tsy mety ho masaka
Vahoaka reraka, mahantra ary noana ankehitriny no hiatrika ny fetim-pirenena. Fetim-pirenena Malagasy izay hankalazana ao anatin’ny olana ara-tsosialy isan-karazany. Na dia miavosa izay tsy izy ny kilalao vita sinoa tonga eto Madagasikara amin’ny vidiny tena mirary, dia toa jerem-potsiny izy ireny satria tsy takatrin’ny fahefa-mividy ny Malagasy. Mahantra ny olona e! Izany no hita etsy sy eroa. Sahirana mitady ny hohanina isan’andro ny vahoaka.
Tao anatin’ny herinandro izay dia niezaka nanao fampisehoana ankalamanjana ny fanjakana amin’ny alalan’ny fampisehoana andapihazo iarahany amin’ny mpanakanto malaza eto Madagasikara. Tena tsara tokoa izany ary isaorana azy ireo amin’ny fihetsika izany saingy tsy taitra ny olona fa malazolazo na dia tonga mijery ireny fampisehoana ireny aza.
Ny kerimesin’ny tafika etsy Betongolo koa dia mahavoavory olona betsaka tokoa saingy olona mahantra sy noana no betsaka ka mijerijery sy manala hamohamo sisa ataon’izy ireny. Dia tena amin’ny fitenenana hoe “manala azy tokoa”.
Ankoatran’ireo rehetra ireo dia mitarika resabe koa ny hanantrehana ny matso eny Mahamasina amin’ny alarobia faha 26 jona tolakandro. Fianakaviana maromaro avy any amin’ny manodidina an’Antananarivo no milaza fa tsy ho afaka hijery ity matso ity satria ho raharaha ny fodiana amin’ny enina ora hariva. Fomba sy efa lasa kolotsaina hoan’ny Malagasy tokoa fa indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina ny manatrika ny matson’ny miaramila amin’ny 26 jona. Vao maraina amin’ny 6 ora izy ireo dia milahatra eo Mahamasina miaraka amin’ny sakafokely hohanina ny atoandro satria fijery izany matso izany. Amin’ity indray mitoraka ity nefa dia niova izany ka lasa tolakandro indray ny fankalazana. Dia tsy ho afaka hanatrika an’izany ny ankamaroan’ireo olona izay zatra nanatrika izany.
Hatramin’izao na dia efa marobe ny “manege” sy ny kilalao isan-karazany etsy Analakely sy Ambohijatovo dia malazolazo ihany aloha hatramin’izao ny fankalazana ny fetim-pirenena ity. Ny antony dia tsy manam-bola ny olona ary ambany dia ambany ny fahefa-mividiny.
Taratrin’ny fety rehetra manerana an’i Madagasikara ny eto Antananarivo. Enga anie ka mba hiala izay fahalazona izay ka na mahantra aza dia mba ho hifaly ihany satria fetim-pirenena Malagasy io. Soa ihany fa nisy ny CAN 2019 izay nandraisan’ny Barea anjara voalohany hoan’ny ekipam-pirenen’i Madagasikara. Faly ny Malagasy maro tamin’ny lalao nataon’izy ireo omaly nanao ady sahala tamin’i Guinée Conakry tamin’isa 2 noho 2. Mba nifaly e!
KRAOMITA MALAGASY : Iza no tsy mitàna ny teny nomena aza fady
Depiote : « Assistants parlementaires » 1500 hanao inona?
Fanoherana : Rava sahady ny RMDM?
Pôlitika : Mora ny fakana fahefana noho ny mitazona azy
Inty sy nday : Velomi-maso ny naloam-bahoaka
Radio Tsioka Vao : Mamy Andriamalala no zandriny indrindra